alaab-qeybiyeyaasha mootada, gawaarida korantada ku shaqeysa, matoorka china gear
alaab-qeybiyeyaasha mootada, gawaarida korantada ku shaqeysa
NER GROUP waa xarunta ku taal Shiinaha oo la dhisay ilaa 30 sano ka hor iyo Yantai Bonway Manufacturer Co., Ltd waa shirkada laanta ee Shiinaha dhul weynaha oo ah shirkad farsamo sare oo xirfad sare leh oo loogu tala galay farsamada darawalnimada farsamada iyo korontada oo inta badan matoorrada, iskuxirka, sanaadiiqda warshadaha iyo matoorrada korantada. Iyada oo nidaam adeeg-iibka kadib aad u fiican, waxaan u dhisnay eray baaxad ganacsi ballaaran oo loogu talagalay mashaariic badan oo injineero wadamo badan ah, oo ka tirsanaa Yurub, Bariga Dhexe iyo Koonfurta Ameerika.
MUQDISHO, MUUQAAL, VALUE
NER waxay kasbataa booskoodii iyagoo ah shirkad caalami ah ee alaabada gudbinta awoodda. Waxaan ku faanaynaa nafteenna sidii shirkad aan kaliya ganacsiga u wadin heerka sare iyo dareen adag ee anshaxeed, laakiin waa shirkad dhisi doonta xiriirrada aaminaadda daneeyayaasha isla markaana abuuraya tabaruc ballaaran bulshada iyada oo la siinayo tikniyoolajiyada iyo adeegyada ka sarreeya sannadaha 100 ee soo socda.
Sannadkeenna La Sameeyay
Sannadle Sannadle ah
Iyagu waxay khabiir nagu yihiin caawinta injineer badan oo mashiinkeena ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la shaqeyno Sogears Group. Dhammaan alaabooyinka iyaga ka yimaaddaa Si fiican ayey u shaqeeyaan, Ma dillaacaan, ma jiraan wax daba-gal ah, wax shumis ah, oo leh wakhtiga hoggaanka ee degdegga ah, habka maraakiibta loo tartamo oo ugu muhiimsan, Tayada Sare! Sikastaba, waxaan u maleynayaa inay yihiin kuwa ugu fiican alaabkeena.
Waan ka mahadcelinayaa qiimaha hooseeya ee ay i siiyaan ku dhowaad 10 sano weligoodna isma beddelo. iyo sanduuqyada sheybaarka wata ayaa si aamusnaan ah ku socda oo qabow ku sii jiraya. Badeecad weyn sifiican looma sameynin dhabar jab! Xaqiiqdii waa inaan amaanaa kooxda, way fiican yihiin!
Waxaan u maleynayaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay adeegooda macaamiil, deg deg ah oo wax ku ool ah。 Mar kasta oo aan wax su'aal ah ka qabno dariiqa gudbinta, waan weydiinnaa iyaga waxaana nalaga soo jawaabi doonaa 30 daqiiqo gudahood. Dabcan, emayl ahaan! Haddii aan ka wada hadalnay whatsapp, waxay qaadan doontaa waqti ka yar. Marka, marka la soo koobo, waxa aan u baahanahay waa jawaabta ugu dhaqsaha badan ee su'aalaheena waana shirkada aan raadineyno waana hubaal, waa lamaanayaasheena had iyo jeer.
Kooxdayadu waxay booqdeen shirkadda Sogears waxayna na siinayaan taageero macaamiil oo aad u cajaa'ib leh, xirfadle, xiise leh, gaar ahaan injineerka iibka ee Lance, waxaan dareemayaa inuu wax walba ku sameeyay xamaasad Waxaan isbarbar dhignay shirkado badan oo Shiinaha ah waxaanan jeclahay Sogears Only. Maaha inaan iyaga siiyo sumcadda wanaagsan, laakiin way istaahilaan!